MLM အကြောင်း သိကောင်းစရာ ~ Myanmar Anti Mlm Group
MLM အကြောင်း သိကောင်းစရာ
. MLM ဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ သိထားကြပါလိမ်မယ် တကယ်တော့ အဆင့်ပေါင်းများစွာနဲ့
ဘောနပ်ပေါင်းများစွာကို ပေးထားပါတယ် ဒီဘောနပ်တွေက
မက်လုံးပေါ့ ပြောမယ်ဆို လူတိုင်းငွေကိုလိုချင်ကြပါတယ်
လူတိုင်းလောဘ ရှိကြပါတယ် အဲ့ဒီလောဘ ဆိုတာကိုပဲ အခွင့်ကောင်းယူပြီးတိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာတော့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဘူး ကြားဖူးတဲ့ MLM တိုင်းဟာမကောင်းခဲ့ပါ
. MLM လုပ်ဆောင်ချက် အထိကက ဈေးကွက်မှာ ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုကို ရောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လိုရောင်းရမလဲ ဆို ရင် မဝယ်ဝယ်ချင်အောင် အပေါ် ကပြောခဲ့တဲ့ မက်လုံး ဘောနပ်ဆိုတဲ့ အရာနဲ့ ပေါ့ သင်ရောင်းရမယ် ဆိုရင်သင်အောင်မြင်ပါပြီ သင်ဆီကဝယ်သွားတဲ့သူကလဲ အခြားသူကိုရောင်းရပါမယ်
ဒါမှလဲသူက အမျက်အစွန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ် သူရောင်းထွက်သွားရင်တော့ သင့်အတွက်လဲ ပိုက်ဆံရလာမှာပါပဲ အဲလိုပဲ အဆင့်ဆင့် ရောင်းသွားရမှာပါ
တစ်နိုင်ငံလုံးကိုပေါ့ တစ်နိုင်ငံနီးပါး ပြန့်သွားပြီဆိုရင်တော့
ချမ်းသာတဲ့သူလဲတော်တော်ချမ်းသာသွားမယ် ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီ ပြန်ရောင်းလို့လဲဝယ်မဲ့သူမရှိ ဒုက္ခရောက်ပြီး
ကျန်ခဲ့မဲ့သူတွေကဲများကြီးဖြစ်နေပါမယ် သူတို့ကတော့ဒီနိုင်ငံပြီးရင် နောက်တစ်နိုင်ငံ သွားလုပ်မှာပါပဲ
. ပြောချင်တာ သူဆီက ကိုယ်ယူတဲ့ပစ္စည်းက
ဈေးကွက် တန်ဖိုးနဲ့ နှစ်ဆဖြစ်နေရင်တော့ ဒါ မကောင်းတဲ့
အချက်ပါ ကိုယ့်က အများသူငှာ ကို မက်လုံးပေးပြီ ပြောတက်
လားမပြောတက်ရင်လဲ မဖြစ်ပါဘူး ကိုယ်ကြောင့်သူတစ်ဖက်သား မျက်ရည်ကျမှ ပိုက်ဆံရမဲ့ အလုပ်မျိုး ဖြစ်နေပါလိမ်မယ် ဘာပဲပြောပြော ဒီလုပ်ငန်တွေက
မလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ ကိုယ်က အများယုံကြည် အားကိုး
အားထားဖြစ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ လူအများကြီးကိုယ့်ဆီက ယူမယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ်ကြောင့်သူတို့ ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်
သင်အတွက်လဲမကောင်းနိုင်ပါဘူး စလုပ်ခဲသူတွေသာ ဘောနပ်တွေ သိန်းထောင်ပေါင်းများစွားရသွားပြီး ခွက်ပြောက်မဲ့သူတွေ များကြီး ကျန်နေခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် အစထဲက ဘယ်သူကမှ မလုပ်ခဲ့ ရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ ကလဲ ငါအရင်လုပ်တာ ငါမရှုံးနိုင်ဘူး အဲလိုအတွေးတွေနဲ့ လူတွေ ကလဲ ဒုနဲ့ဒေ ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ် ဒါဆိုရင်တော့ လူပေါင်းများစွားရဲ့ ပိုက်ဆံ
တွေ လူတစ်ယောက်ကို ပေးလိုက်ရသလိုဖြစ်နေပါမယ် ဒါကြောင့် အစထဲက ဘယ်သူမှ မလုပ်ခဲ့ရင် ဘယ်သူမှလဲ ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ပါဘူး
. နောက်တစ်ခု က MLM က ပစ္စည်းက ဈေးကွက် တန်ကြေးနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိလား လေ့လာပါ အသုံးစွဲ သူများတဲ့ ပစ္စည်းလား လေ့လာပါ ဥပမာ အတင်းရောင်းစရာ လိုလား
အများပြည်သူ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း အသုံးအဆောင်မျိုးဆို ရင် လုပ်သင့်ပါတယ် အခုပြောတဲ့ အချက် ကအခြေခံပါ အဲဒီအခြေခံတောင် မရှိဘူးဆိုရင်တော လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး
ကိုယ်နိုင်ငံသား အချင်းချင်း ဇာတ်တူသားစားသလိုသာဖြစ်နေပါမယ်လို့